Maxaa Dhaca Inta Uu Socdo Imtixaanka Miskaha Oo La Qaadayo Pap Pap Test?
Imtixaanada miskaha waa hab fiican oo haweenku u daryeelaan caafimaadkooda siilka. Baadhitaanku wuxuu u oggolaanayaa bixiyahaaga daryeelka caafimaadka ama khabiirka OB / GYN inuu qiimeeyo xubinta taranka iyo xubnaha taranka si loo eego calaamadaha digniinta hore ee dhibaatooyinka. Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka, waxaan fahamsanahay baaritaanka miskaha iyo Pap smear waxay dadka ka dhigi kartaa inay dareemaan walaac yar. Tani waa sababta kooxdeena ay ugu wargeliso bukaanka waxa laga filayo daryeelka dumarka. Jadwal ugu samee qiimeyntaada guud wacaya mid ka mid ah meelaha aan ku habboon nahay ee Columbus, Dublin, iyo Westerville, OH.
Ayaa u baahan baaritaanka miskaha?
Haweenka oo dhan waxay ka faa'iideystaan ​​baaritaanka joogtada ah iyo baaritaanka miskaha. Xirfadlayaasha caafimaadka badankood waxay isku raaceen in baaritaankaaga ugu horeeya ee miskaha la sameeyo illaa dhalashadaada 21aad. Bixiyahaagu wuxuu sameyn karaa talooyin ku saabsan inta jeer ee aad u baahan tahay in lagu baaro, in kasta oo dumarka badankood ay mid kaliya u baahan yihiin sanad walba.
Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka ayaa sidoo kale bukaanka kula taliya inay jadwal u sameeyaan daryeelka dumarka sifiican hadii ay dareemaan astaamo aan caadi aheyn sida xanuunka siilka iyo dheecaanka. Arrimaha kale ee suurtagalka ah ee u baahan ballanta waxaa ka mid ah:
Dhiigbax aan caadi ahayn oo xubinta taranka dumarka ah oo aan la xiriirin caadadaada
Xanuuno caadada oo xanuun badan oo farageliya howlahaaga caadiga ah
Xanuun caloosha hoose
Muddooyin la waayey
Caabuq, cuncun, ama urka xun ee xubinta taranka haweenka
Maxaad filan kartaa inta lagu jiro baaritaanka miskaha
Haweenka maraya baaritaanka miskaha iyo Pap smear ayaa laga codsan doonaa inay u beddelaan goonnada caafimaadka isla markaana la siiyo xaashi asturnaan ah oo ay ku duubtaan dhexda. Xirfadleyda Caafimaadka Haweenka waxay wax ka baran doonaan taariikhdaada caafimaadka iyo caafimaadka galmada ka hor intaanay weydiinin wareeggaaga caadada, taariikhda uurka, iyo xulashooyinka ka hortagga uurka.
Baaritaanka Pap smear wuxuu bilaabmayaa markaad ku jiifto miiska baaritaanka oo aad cagahaaga dhigto walaaqyo. Khabiirkaaga OB / GYN wuxuu markaa isticmaali doonaa qalab loo yaqaan 'speculum' si uu si tartiib ah u furo siilka. Suuf waxaa loo isticmaalaa in lagu soo qaado shaybaarka baaritaanka Pap smear, oo lagu baaro kansarka xubinta taranka dumarka. Ogaanshaha hore ee kansarka ayaa muran la’aan ka mid yahay qaybaha ugu muhiimsan ee daryeelka dumarka sida wanaagsan looga helo Columbus, Dublin, iyo Westerville, OH
Pap smear ka dib, mala-awaalka waa lagaa qaadayaa dhakhtarkaaguna wuxuu baari doonaa ilmo-galeenkaaga, makaanka afkiisa, ugxan sidaha, iyo dhuumaha ugxantaada. Naso oo hubso in qaybtaan qiimeynta ay noqon karto mid aan raaxo laheyn, laakiin waa inaysan keenin wax xanuun ah ama raaxo la'aan joogto ah. Bukaanku waa u xor inay soo qaadaan wixii su'aalo ah ee ku saabsan caafimaadkooda siilka waqti kasta.
Kadib baaritaanka miskahaaga
Bukaanleyda waa la lebisan karaa ka dib marka baaritaanka miskaha ay dhammaadaan. Bixiyahaaga Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka ayaa ku ogeysiin kara haddii aan ogaanay wax aan caadi ahayn inta uu socday baaritaanka ama haddii loo baahan yahay talaabooyin kale oo kan xiga. Tan waxaa ka mid ah qoritaanka wixii daawo ah ee loo baahan yahay ama ballanta ballanta dabagalka ah. Suufka la isticmaalay muddadii baaritaanka Pap smear-kaaga ayaa u baahan doona in lagu baaro mikroskoob kahor inta aan la go'aamin cudurka.
Jadwal u samee daryeelka dumarka fiican ee Ohio
Bukaanku waa inaysan sugin waqti dheer kahor intaan jadwalka daryeelka dumarka si fiican loola jaanqaadin khabiir ku takhasusay OB / GYN, gaar ahaan haddii ay muujinayaan astaamo aan caadi ahayn. Haddii aad su'aalo ka qabtid waxa dhaca inta lagu jiro baaritaanka miskaha ama Pap smear, jadwal u samee qiimeynta Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka ee Columbus, Dublin, iyo Westerville, OH. Kooxdayada hibada leh waxay kaa dhigi kartaa inaad dareento raaxo intii suurtagal ah inta hawshu socoto.
Goobta Columbus Goobta Dublin Goobta Westerville Daryeelka Dumarka Fiican